AU, UN iyo awoodaha dunida ayaa walaac ka muujiuydoorashada So... | Universal Somali TV
AU, UN iyo awoodaha dunida ayaa walaac ka muujiuydoorashada Soomaaliya
December 28 2016 17:20:35
Midowga Afrika, Qaramada Midoobay iyo dalalka reer galbeedka ayaa war-saxaafadeed ay si wadajir u soo saareen "walaac ka muujiyeen" arinta ku saabsan habka doorashada Soomaaliya.
Halkii loo dabaal dagga lahaa caleema saarka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya maalintii Talaadada, Dowladdaha iyo Hay’addaha Caalamiga ee daneeya Arrimaha Somalia ayaa ku dhawaaqay oo si wadajir ah ugu baaqay hoggaamiyayaasha madasha qaranka inay ku noqdaan dhowr go'aamada la xidhiidha doorashada ay ku dhawaaqeen Sabtidii lasoo dhaafay.
War-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu xusay go’aanka Hoggaamiyayaasha Madasha Qaranka inay kansal gareeyaan dhamaan Murashixiinta ay Guddiga Doorashadda ku eedeeyeen xad-gudubyo isugu jira cabsi-gelin, Handadaad, Musuqa iyo Is-dabamarin.
"Dowladdaha iyo Hay’addaha Caalamiga ee daneeya Arrimaha Somalia waxaa kaloo ay aaminsan yihiin in sumcada iyo nidaamka doorashada 2016 meel looga dhacay ," iyadoo bayaanka ku taageereen Urur-goboleedka IGAD, Maraykanka, Midowga Yurub iyo shan dal oo Yurub, oo ay la socdaan Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay .
kooxaha caalamiga ah ayaa sheegay in habka doorashada ay saameyn weyn ku leedahay Soomaaliya. AU oo maal galiya ciidamada AMISOM ee la dagaalamaya Xarakada Al-Shabaab, halka, UN ,Maraykanka iyo Midowga Yurub uu mid kasta khayraad badan oo gooni ah ku bixiyay dadaalka labaatan sano-ee la doonayo in lagu soo celiyo xasiloonida Soomaaliya.
Kan-xigaAU, UN iyo awoodaha dunida oo walaac ...
Kan-horeMadaxweynaha Puntland oo laga dalbada...
31,968,233 unique visits